Shan qodob oo faa’ido u ah hadii isticmaalka Computer-ka indhuhu ku caajisaan – SBC
Shan qodob oo faa’ido u ah hadii isticmaalka Computer-ka indhuhu ku caajisaan
Posted by editor on December 3, 2012 Comments
Kumanaan kun oo qof ayaa halis galiya indhahooda, iyagoo gees iska dhiga inay fiiro u yeeshaan sidii ay uga hortagi lahaayeen xanuunno ka soo wajaha indhaha, iyagoo daryeelkii loo baahnaa aan siin ama booqan dhakhaatiirta indhaha.
Hay’adda lagu magacaabo Medical Advisory Board (IMAB), oo sameysay cilmibaaris la xiriirta xanuunada dadku ka cawdaan ee la xiriira indhaha ayey ku ogaadeen in 17% dadku aanay sameyn baaritaankii loo baahnaa ee indhaha.
Steve Schallhorn oo ah gudoomiyaha ururka Optical Express ee qaabilsan daaweynta cudurada indhaha ayaa sheegay in kororka isticmaalka Computarada, Mobile-da, daawashada Tv-yada ay taasi dhalisay in dad badan ay ka cawdaan indha xanuun, iyadoo dadkaasi isagu jiraan kuwa shaqeeya iyo kuwa kale ee isticmaala aalladaasi xiliyada ay firaaqada yihin ama guriga joogaan.
Hadaba waa kuwa talooyin muhiim ah oo la xiriira arintan:
Haddii indhahaagu ku daaleen daawashada Tv-ga, isticmaalka lap top ama Computer-ka miiska (Desk top), isla markaana indhaha aad ka dareento xanuun waxaa haboon inaad sameyso arimahan muhiimka ah.
1: Waqti qaado, ka naso daqiiqo kooban haba noqoto 5 daqiiqo Tv-ga ama Computer-ka, isku day inaad jimicsi sameyso adigoo raaxo raadinaya, indhaha isku qabo, hadii muraayadaha indhaha (Ookiyaale) aad xiran tahay/gashan tahay iska bixi, Is-daji, hawo qaado, ama neef jiid daqiiqo si aad indhaha u siiso waxoogaa raaxo ah.
2: Hadii aad guriga meel ka baxsan aad kula kulanto calaamadahan sida goobta shaqada isku day in marka guriga tagto aad waqti kooban ka qaadato daawashada Tv-ga, ama Computer-ka, tusaale hadii maanta oo dhan shaqadaadu aheyd eegista shaashada, ma haboona inaad ku boodo eegista E-mail-ka (cheking E-mail), ama aad fiirso mobile-ka amaba aad wax akhriso mudo saacad ah.
3. Badal Nalka/Light-ka: Waxay kaa caawin kartaa in nalka aadka u iftiiminka badan aad ku badasho mid iftiin badan aan laheyn in indhuhu ay dareemaan waxoogaa raaxo ah, waxaase muhiim ah inaadan ka dhigin mugdi halka aad ku sugan tahay waayo indhuhu markaasi waxay doonayaan inay si xoog leh u raadiyaan wax ay arkaan, marka in la adeegsado nal iftiinkiisu aanu badneyn isla maraana aannu yareyn.
4. Libiqsi (Indho isku qabqabsho): Dad badan ayay dhici kartaa in inta ay ku jiraan shaqada ama ay Tv- daawanayaan amabase ay Computer isticmaalayaan inaanay sameyn libiqsi indhaha, iyadoo taasi dhalin karto in indhuhu noqdaan kuwa qalalan hadii ay yaraato libiqsiga, inaad sameyso ilaa shan jeer waxay caawin kartaa in indhuhu dareemaan waxoogaa jimicsi ah, hadii ay wali yihiin kuwa qalalan yihiin isku qabo qadar kooban, hadii loo baahdo isticmaal goojada indhaha ee loogu tala galay in ay ka bi’iso qaleylka ama angaga.
5. Riix riixid ama Masaajeyn: Markasta oo qaadato waqti dheer inaad shaqo Computer da qabato waxaa la isku raascan yahay in muruqyada wajiga hore ay dareemaan daal, waxaa haboon in si tartiib ah loo Masaajeeyo qoorta, madaxa & halka ay ku yaal suniyaha indhaha.
ASC Waa arin muhiim ah waana in laga faa’ideystaa shukran sc.
axlaam xasan says:
A/c/w aad bd umahadsantihiin sida wcn ee aad uga qayb qaadanaysaan cfmdka bulshada waxaa mahad leh allah nasiiyey indhaha waa in aanu ilaalinaa sida ugu haboon uga faa iidaysana mhdsandiin